Howlgal Lagu Dilay Xubno Al Shabaab U Qaabilsanaa Canshuuraha Oo lasoo Bandhigay.(Sawiro) – Heemaal News Network
Howlgal Lagu Dilay Xubno Al Shabaab U Qaabilsanaa Canshuuraha Oo lasoo Bandhigay.(Sawiro)
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa saakay howlgal qorsheesan waxa ay ka fuliyeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan goob Al Shabaab ku qaadayeen Sakada iyo canshuuraha.
Howlgalkan ayaa intii uu socday waxa ay ciidamada Danab toogteen sadex xubnood oo katirsan Al Shabaab kuna sugnaa goobta sakada lagu qaadayay , waxaa sidoo kale Danab gacanta ku dhigeen hubkii ay wateen ragaasi la dilay.
Taliyaha Guutada 16aad ee ciidanka Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik ayaa Warbaahinta u sheegay in howlgalkan lagu dilay sadex xubnood oo katirsan Al Shabaab uu ku jira ninkii u qaabilsanaa Canshuuraha uu magaciisa ku sheegay Abuu Haashim.
Waxa uu sheegay taliyaha in ciidamada Danab sii xoojinayaan howlgalada ay ku beegsanayaan goobaha uu sheegay in Al Shabaab dadka uga qaadaan lacagaha iyo xoolaha baada ah .
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa howlgalo qorsheesan ka fuliya qaar kamid ah gobolada dalka gaar ahaan deegaanada ay maamulaan Al Shabaab, waxaana ciidamadan howlgaladooda mararka qaar gacan ku siiya ciidamo Mareykan ah.
Madaxweynaha Puntland Oo Maanta si Rasmi ah U Diiwaangeliyey Urur Siyaasadeed